Matter indlela eqinile futhi kahle imisipha ingalo, inquma lizinga ukuqina lomuntu omdala futhi ingane. Ulele imisipha ingalo wenze umzimba oqinile futhi wezemidlalo. Inani elikhulu labantu dream yokuba abanikazi imisipha definition ngezingalo zakhe, befuna ozibongayo muscled phambi kwabanye. Nokho, kungase kube umbuzo esinengqondo: "? Kanjani ngokushesha ukumpompa, waphakamisa izandla zakhe ekhaya kungenzeka"
Yebo, noma kanjani. Ukuze wenze lokhu, asikho isidingo ukuya ezemidlalo sigaba. Ekhaya, ungakwazi kalula nika indawo umzimba. Nokho, kubalulekile hhayi nje kuphela babe ngolwazi lokuthi ungahlala kanjani ngokushesha kufuthwe izandla zakho ekhaya, kodwa futhi ukwazi ukuthi ukukhetha ukudla ngesikhathi esifanayo. Phakathi kwezinye izinto, udinga ukuba bangayeki imikhuba emibi.
Njengoba i asizayo kusho sokuba imisipha ingalo ukuqeqesha kuyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa ibha ovundlile, dumbbells, futhi ziyahlukahluka izivivinyo umqondo omuhle ukusebenzisa isikhwama isibhakela. Ungakwazi zifakwe kulolu hlu indophi amasongo Gymnastic.
Ngakho, siphendukela ukucabangela indlela esiwusizo ngayo ngokushesha kangakanani futha isandla ekhaya. Nokho, ngaphambi kokuba uqale ngokwenza izivivinyo, kudingeka uthole isisindo izinsimbi. Lesi sici ngeke abe nesithakazelo ngokuyinhloko kulabo ufuna ukwazi: "? Ukumpompa kanjani ngokushesha isandla izinsimbi" intsha ukuncoma izingane dumbbell. Izisindo kwabesilisa nabesifazane futhi kuhluke isisindo.
Ngakho, ngokushesha kangakanani futha isandla ekhaya? Ukuze wenze lokhu, zikhona eziningana umzimba. Nazi ezinye zazo.
Ukuzivocavoca № 1
Kufanele ibe bushelelezi bese ubeka izinyawo ehlombe-ububanzi ngaphandle. Khona-ke kubalulekile ukuba alethe izindwani ehlombe ndawonye, nzima imisipha besisu, bese yehlisa emahlombe. Ngemva kwalokho kumelwe ubambe dumbbell, izingalo awe kanye umzimba, izintende phambili. In the isinyathelo esilandelayo udinga bend izandla zakho ukuze ukuhambisa dumbbells ehlombe lakho. Ngemva kwalokho kufanele ubuyele indawo yokuqala. Ukusebenzisa ngenhla izitimela le triceps.
Ukuzivocavoca № 2
Udinga ukuqondisa up bese ukuthatha isinyathelo esisodwa phambili unyawo lwesobunxele. Isandla sokunene kufanele uthathe dumbbell uyibambe ukuze ingalo eyayizimisele endololwaneni engela ayisishiyagalolunye degree kanye eduze umzimba kanye entendeni ebhekene ngaphakathi. Khona-ke udinga ukuba nzima imisipha yakho besisu futhi ukuguqa yakho kancane. Kube sekulandela kancane mafutha phambili bese ubamba parallel yakho emuva phansi, isandla sakhe sokhohlo ukuthatha onqenqemeni kwesitulo. Kancane ukubuyela ukuqala isikhundla futhi benze umsebenzi nge Ngakolunye uhlangothi. Ukusebenzisa ngenhla kuhloswe ukuqeqesha triceps.
Indlela ngokushesha ukumpompa, waphakamisa izandla zakhe ekhaya ngenye indlela? Kulula: ngosizo umzimba kubha ovundlile. Uzokwazi ukuba kuphinde kuthuthukiswe imisipha kwebhande ehlombe emuva. Ukuba kubha esimweni okwesikhashana, kufanele kwenziwe ngokumane turning umzimba kwesokunene nezinhlanu kwesobunxele. Ngakho ungakwazi ekhiphela up imisipha emuva nezingalo.
Ngosizo izincomo ngenhla, ungenza isithombe sakho yabasubathi enhle.
Itiye "Lose": impendulo, ukwakheka kanye izici ibhekwa wezokudla
Ukudla esikoleni enempilo
Indlela ukunciphisa umzimba ngaphandle ukudla ekhaya? Ukulahlekelwa isisindo ngaphandle ukudla
Indlela ashise amanoni? zikhona izindlela
Izikhangibavakashi Shchelkovo: incazelo, uhlu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
"Persil" Tablets: yokusetshenziswa, ikakhulukazi
Ukuguqulwa kuya ku-NEP - kubangela nemiphumela
IPad kuthé ngokushesha ngemuva kokucima?